Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Kedu ihe kpatara iji efe Finnair site na Helsinki gaa ụwa?
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Finland na -agbasa ozi ọma • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Akụkọ na -agbasa na Spain • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
Finnair na -ekwupụta ụgbọ elu ọhụrụ Europe, Asia na North America
Finnair kwupụtara ugboro ugboro na ụgbọ elu ọhụrụ na Tokyo, Osaka, Seoul, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, Stockholm, Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin, Frankfurt, London, Paris, St. Petersburg , Krakow, Gdansk, Madrid, Malaga na Barcelona.
Finnair na -aga n'ihu na -eje ozi ebe ndị isi Eshia na -aga, na -efe efe kwa ụbọchị na Tokyo, Seoul na Bangkok, ma na -enye Singapore na Hong Kong ọtụtụ ugboro kwa izu.
Finnair ga -ewusi ọrụ North America ya ike ma jeere Chicago ozi, nke bụbu ụzọ oge ọkọchị, n'oge oge oyi niile.
Netwọk Finnair nke Europe ga -abawanye ngwa ngwa ugboro ugboro n'oge oyi niile, yana ọrụ ugboro abụọ kwa ụbọchị na isi obodo Europe dịka Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin na Frankfurt.
Ka akụkụ nke ndị ọgwụ mgbochi zuru oke na -aga n'ihu na -abawanye ma ọha na -emepe, njem na -eburu n'ọtụtụ ahịa. Finnair na -ezute mmụba njem na -arịwanye elu site na ịgbakwunye ugboro na ebe na netwọkụ ya na Europe, Eshia na North America maka oge oyi na -abịanụ.
Olympus igwefoto dijitalụ
Finnair na -aga n'ihu na -eje ozi ebe ndị isi Eshia na -aga, na -efe efe kwa ụbọchị na Tokyo, Seoul na Bangkok, ma na -enye Singapore na Hong Kong ọtụtụ ugboro kwa izu. Ọrụ Osaka nke Finnair maliteghachiri n'ọnwa Ọktọba, na -agbasa ọnụnọ Finnair laghachi n'ahịa ndị Japan, ebe Nagoya sonyeere Pọtụfoliyo ụzọ a na February. Finnair ga -amalitekwa ije ozi ya Dubai njikọ na ụgbọ elu-ahụ sara mbara.
Finnair ga -ewusi ọrụ North America ya ike ma jeere Chicago ozi, nke bụbu ụzọ oge ọkọchị, n'oge oge oyi niile. Finnair na -ejekwa New York kwa ụbọchị site na Helsinki ma na -arụkwa ụgbọ elu atọ kwa izu na Miami na Los Angeles n'otu n'otu. Na mgbakwunye na ijere North America ozi site na ọdụ Helsinki ya, Finnair ga -ewebata ụzọ gawara Los Angeles na New York site na Stockholm, Sweden. Finnair ga -ewebata ụzọ ụzọ si Stockholm gaa Miami, Phuket na Bangkok, dịka ekwuputara na mbụ.
Netwọk Finnair nke Europe ga -abawanye ngwa ngwa ugboro ugboro n'oge oyi niile, yana ọrụ ugboro abụọ kwa ụbọchị gaa n'obodo ndị dị na Europe dị ka Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin na Frankfurt, yana ugboro atọ kwa ụbọchị. London na Paris. Finnair na -abawanye ugboro ugboro na St. Petersburg iji kwado okporo ụzọ na -aga ebe Finnair nke North America.
Finnair na -enyekwa isi obodo Scandinavia ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị, Finnair ga -ewebata Krakow na Gdansk maka oge oyi. Finnair ga -abawanye ugboro ugboro na njem ezumike ndị ama ama na Spain, na -eje ozi Malaga, Canary Islands, Madrid na Barcelona nwere ọtụtụ ugboro n'izu. Ọzọkwa Finnish Lapland na -aga n'ihu na -adọta ndị njem oge oyi na Finnair na -enye Rovaniemi, Ivalo na Kittilä njikọ kwa ụbọchị, yana ọrụ abụọ kwa ụbọchị na Kuusamo, yana njikọ dị mma sitere na Helsinki.
Ole Orvér, onye isi azụmaahịa, Finnair kwuru, "Obi dị anyị ụtọ inwe ike ịgbasa obosara na ịdị omimi nke netwọkụ anyị.
Hilton 1, Hyatt 2, Marriott naanị 5 na-adịgide ndụ COVID ...